Sunday July 07, 2019 - 08:51:14 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Xuska munaasibaddan oo lagu qabtay hool aad u qurux badan calanka buluugga Soomaaliya lagu naashnaashay dox iyo dulba ayna ka soo qaybgaleen muwaadiniinta Soomaaliyeed ku dhaqani cariga Swisska ooy soo agaasimeen Ururka Dhallinyarada Samafalayaasha Soomaaliyeed ee Bariga Switzerland hoggaanka uu u hayo halyeeyga da'da yar Mudane C/LLaahi Cali Jareere ayaa ku bilaabatay si habsami leh.
Xafladdan waxaa lagu dhex arkayay bulshada qaybaheega kala duwan caruur iyo ciroole bini aadamku inta uu ka kooban yahay rag iyo dumarba, kuwaaso meelo dhow dhow iyo masaafooyin fogfogba u soo jaray aawada inay xaadir ahaadaan xuska maalinta xoriyadda dalkeena Soomaaliya.
Goobta waxaa khudbado ka jeediyay aqoonyahano iyo waxgarad kala geddisan oo aad uga faallooday dhibtii laga soo maray madaxbanaanida qaranka Soomaaliya iyo hanashadiisi calanka buluugga, walow joogadeenan maanta ah Soomaaliya ay habacsantahay ooy ciidamo shisheeye kumaan kuno askari ah ay joogaan. Dadka hadalada wax ku oolka ah munaasibadda ka jeediyay waxaa ka mid ah sida:- Maxamuud Xuseen Maxamed oo aayaadka quraanka Kariimka qawlkii Eebbe ku furay iyo Mudane C/LLaahi Gacan, Mudane Bashiir Nafaqo, Mudane Xuseen Qoorleexshe, Maxamed Isaaq Caaro, Mudane Muuse Axmed Maxamed iyo Dr C/LLaahi Ibraahin Xasan Amaandhoorey oo ah madaxa guud ee saxaafadda Koonfurta Soomaaliya oo taariikh aan la ilaawi doonin ku saabsiisan 1-da Luuliya masraxa kaga shanqariyay lana arkayay kolkuu Datoorku mikiroofanku haystay dad farabadan oo u sacbinaya aadna ula dhacsanaa taariikhda gaamurtay ee uu xusuusiyay bulshada. Goobta sido kale waxaa khudbad gaabano qiimi leh ka jeedisay gudoomisada jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Graubunden Marwo Ilhaan Maxamed Aadan, iyado koob ciyaareed kubadda cagta u dheexeyay xulalka Soomaalida Switzerland iyo Jarmalkuna guushu ciyaartu ku raacday munaasibaddan 1-da Luuliya aawadeed into lagu soo beegay gabangabadii koobna lagu gudoonsiiyay kooxdii ciyaartooyda Soomaalida Jarmalka ooy guushu raacday.
Xafladdan oo si toos ah uu u xiriirinayay gudoomiye C/LLaahi Cali Jareere ayaa koobka iyo abaalmarinada ciyaaryahanada la gudoonsiinayay lagu arkayay masraxa gudoonka Tiimka Jugta Culus ahna madaxa ciyaartooyda gobolka Nàchtel ee dalka Switzerland Mudane C/Rixiin Xaaji Cali Maaxi oo abaalmarino gacantiisu ku gudoonsiinayay qaar ka mid ah ciyaartooydii goobtaasi joogtay, waxaana saacaddu kolkay ku dhacday 12:00 oo gaw ah si toosa dhamaan martida iyo martigeliyayaashuba ay wada saareen calanka bulluugga ah ee Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Warbaahinta ku bohowday Koonfurta Soomaaliya oo afka qalaad loo yaqaan Southern Media Co-Operation tiimkeedo qalabaysan si rasmi ah loogu casuumay madashan, waxaa ay kamaradaheegu qabanayeen fanaaniin xamaasadaysan oo afka Soomaaliga heeso waddani ah masraxa kaga luuqaynayay oo uu ka mid yahay fanaanka wayn Soomaaliga ah Jabuuti u dhashay Al-Fanaan Xasan Waddo, kaaso ka qaybqaadashada xuska 1-da Luuliya awgeed uga soo kicitimay Scandanevian-ka.
Gudoonka Ururka Dhallinyarada Samafalayaasha Soomaaliyeed ee Dalka Bariga Switzerland Mudane C/LLaahi Cali Jareere iyo tiimkiisi maddaalayaasha ah oo mar waliba u taagan danta guud ee Soomaalinimadu ayna u horeeyso ta walaaltinimada Islaamnimada ah, ayaa had iyo goor xoog iyo xoolo ku baxsha waqtigooduna ku lumiya kulamada nuucan oo kale ooy bulshada Soomaaliyeed aadka ugu ooman tahay, tahayna in aad loo badsho. 1-da Luuliya ayaa ku beegan xiligii gobollada Koonfureed ay gumaystihii caddaanka Taliyaaniga ahaa ay koorihiisi gumaysigu kor isaga qaadeen, islamarkaana Koonfurtii iyo Waqooyigii kala karantiilnaana kursigoodu mid noqday. Abaaldhaco ma wacnee ugudambayntii, abaabulayaasha xafladdani qiimiga iyo qaayahay lahayd qarada waynayd isqabqabsiga iyo isximximintii burburkan badi Soomaalida lagu dhex arki kiray kolka ay kulankan oo kale isugu yimaadeen weelka shuraakada aanay ka muuqan xalatoole, islamarkaana gudoomiye C/LLaahi Cali Jareere iyo ururkiisu samaha u taagan cuncun iyo sharaab ba ay martisharafkii ka dharjiyeen iyo hadal sano deeqsi ah ayaa waxaa ay ku soo idlaatay jawi aad u heer sareeya. Hayeeshee madmadowbay noqotiyo siday u maaryaadday maraandhawaynba amar Alle laakiin!!